यी खानेकुरा साझँ सात बजे पछि भुलेर पनि नखानूहोला ः कारण यस्तो छ पछुताउनु पर्ला - Sudur Khabar
यी खानेकुरा साझँ सात बजे पछि भुलेर पनि नखानूहोला ः कारण यस्तो छ पछुताउनु पर्ला
प्रकाशित मिति : ४ जेष्ठ २०७५, शुक्रबार १६:२१
तपाईं बेलुकाको खाना साधारणतया कति बजे खानुहुन्छ ? अनि, बेलुकाको खानामा के कस्ता खानेकुरालाई प्राथमिकता दिनुहुन्छ ? साँझको खाना कतिखेर खाने र के के खानेकुरा समावेश गर्ने भन्ने कुराले तपाईंको स्वास्थ्यमा निकै फरक पार्छ ।
राती अबेर खाना खानुभन्दा बेलुका सबेरै खाना खाएर सुत्नु स्वास्थ्यका राम्रो मानिन्छ ।शरीरको तौल सन्तुलित राख्न चाहनेहरुले त बेलुकी ७ बजेपछि खाने कुरा नखाएकै राम्रो । दिउँसो नै धेरै खानेकुरा खाइएको छ भने त बेलुका सकेसम्म कुनै पनि खानेकुरा नखाएकै राम्रो । यसरी दिउँसो पनि खानु र राती सुत्ने बेला पनि खानु भनेको मोटोपनालाई निम्त्याउनु हो । अर्कोतर्फ विज्ञहरुले बेलुकीको ७ बजे डिनर खाइसक्नु स्वास्थ्यको दृष्टिले धेरै राम्रो भएको बताउँने गरेका छन् ।
राती सुतेपछि शारीरिक गतिविधि शुन्य हुन्छ । तसर्थ, खाएका खानेकुरा पच्न पाउँदैन । त्यसले गर्दा पेटमा समस्या हुने, निन्द्रा नलाग्ने र निन्द्रा विथोलिने हुन्छ ।राती खान नहुने केही खाने कुरा यस्ता छन्राती टन्न भात खाएर सुत्नु भनेको भुँडी बढाउनु हो । त्यसैले बेलुकीको खानामा रोटी समावेश गरे निकै राम्रो हुन्छ ।स्वास्थ्यलाई खासै राम्रो नगर्ने र पाचन प्रणालीमा पनि समस्या ल्याउने तथा तौल बढाउने खालका खाने कुरा सुत्ने बेलामा खानु हुँदैन । यस्तो खाने कुराले पेटमा समस्या त ल्याउँछ नै निद्रा पनि विगार्छ ।
रातको समयमा खाना पछि उच्च क्यालोरीयुक्त खानेकुरा जस्तै, जेरी, रसवरी खानुहुँदैन ।फलफूलमा पनि सुगरको मात्रा धेरै हुने भएकाले सुत्ने बेलामा नखान स्वास्थ्यकर्मीहरुले सुझाव दिने गरेका छन् । अम्लीय तत्व भएका फलफूल तथा जुस रातमा पिउनु पनि पाचन क्रियाको दृष्टिले उपयुक्त मानिँदैन ।आलु, आलुचिप्स जस्ता खानेकुरा पनि सुत्ने बेलामा नखाएकै राम्रो । यस्ता खाने कुरामा उच्च मात्रामा क्यालोरी, चिल्लो तथा सोडियम हुन्छ र सुत्ने बेलामा खादा स्वास्थ्यलाई खासै फाइदा गर्दैन ।
उच्च फाइबर तथा कार्बोहाइड्रेटयुक्त खानेकुराहरु पनि रातको समयमा खानु हुँदैन । यस्ता खानेकुरा बिहानको समयमा खाएमा दिनभरीको परिश्रमले राम्रोसँग पच्न पाउँछन् ।रातको समयमा पास्ता खानु भनेको भुँडी बढाउनु मात्रै हो ।रातमा सुतिसकेपछि शारीरिक गतिविधि शुन्य प्रायः हुने भएकाले राति सुत्नु अगाडि काजु, बदाम जस्ता नट्सहरु खानु राम्रो मानिँदैन । यसले ती खानेकुराहरु पच्न गाह्रो हुने र निद्रा बिथोलिने सम्भावना हुन्छ ।
राती रक्सी त झन स्वास्थ्यको दृष्टिले सबैभन्दा खराब हो ।रातमा रेड मिट, धेरै कुखुराको मासु वा अन्य मासु धेरै मात्रामा खादा पनि निद्रा बिथोलिने र पाचन प्रक्रियामा समस्या आउने गर्छ ।टेलिभिजन हेर्दै यस्ता खानेकुरा खाने बानी छ भने त्यो आजैबाट छाड्नुस् । यसरी टेलिभिजन हेर्दै खाना खादा आवश्यकता भन्दा बढी खाइन्छ । जसले स्वास्थ्यलाई फाइदा गर्दैन । नेपालीपत्रबाट